ခြောက်သွေ့သော အသားအရေတို့သည် အဆီဓာတ် လုံလောက်စွာ မရှိသောကြောင့် ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ အရေပြားသည် သက်တောင့်သက်သာ မရှိခြင်း၊ တင်းရင်းခြင်းနှင့် ယားယံခြင်းတို့ ဖြစ်လေ့ရှိပါသည်။ အရေပြားခြောက်သွေ့ခြင်းသည် ပတ်ဝန်းကျင် အနေအထားနှင့် လူနေမှုပုံစံတို့ပေါ်တွင် သိသိသာသာ မူတည်ပါသည်။ မသက်မသာဖြစ်နေသော ခံစားချက်သည် နှင်းခူနာတို့တွင် တွေ့ရလေ့ရှိပြီး အသက်ကြီးသူများတွင် ရေရှည်အမြဲတမ်းဖြစ်တတ်သည်။
အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သူများတွင် ဖြစ်လေ့ရှိသော senile xerosis: မွေးကင်းစကလေးများတွင် ဖြစ်တတ်သော အရေပြားခြောက်သွေ့မှုရောဂါ တို့တွင်လည်း အရေပြားအကာအကွယ် အားနည်းနေပြီး ခံနိုင်စွမ်းမြင့်မား၍ သန်မာအောင် လုပ်ဆောင်သင့်ပါသည်။
သင့်၏ အရေပြားအမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ ပစ်မှတ်ထား အသုံးပြုသင့်ပါသည်။
သာမန်နှင့် ခြောက်သွေ့သောအသားအရေ ဆိုင်ရာဆောင်းပါးများနှင့် အကြံပေးချက်များ
ဆေးတွေက အသားခြောက်စေတတ်သလား။ ဆေးကြောင့် အသားခြောက်တာကို ဘယ်လိုကုသကြမလဲ။
ခြောက်သွေ့သောအသားအရေမှာ ဘာဖြစ်တတ်လဲ? (နှင်းခူခဏခဏပြန်မဖြစ်အောင် ဘယ်လိုဂရုပြုရမလဲ?)
ကျန်းမာသော အသားအရေကို နားလည်သဘောပေါက်ခြင်း
ခြောက်သွေ့သော အသားအရေနှင့် ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်သော အသားအရေ ကွာခြားချက်များ
တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖြစ်ခြင်း၊ အရေပြားကွာ၍လန်ခြင်း၊ ကြမ်းတမ်းခြင်းတွေ ဖြစ်နေသလား? ခြောက်သွေ့နှင့် အလွန်ခြောက်သွေ့သော အသားအရေက နေ့စဉ်နှင့်အမြဲ ဖြစ်နေမှာဖြစ်တယ်။ ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်အသားအရေကတော့ ခဏတာပဲဖြစ်မှာပါ။ ဒီအကြောင်းတွေကို သိရှိနားလည်ဖို့ ရှာဖွေလိုက်ပါ။
ပုံမှန်၊ ခြောက်သွေ့၊ ယားယံသော အသားအရေ
ခြောက်သွေ့သော အသားအရေတွင် တင်းကြပ်မှု၊ အသားအရေကြမ်းတမ်းပြီး အကွက်လိုက်ယားယံခြင်းများ ဖြစ်တတ်သည်။
BIODERMA ၏ အဖြေ: Atoderm ထုတ်ကုန်များကို ခေါင်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်တွင် ခြောက်သွေ့သော၊ အလွန်ခြောက်သွေ့သော၊ ယားယံသော အရေပြားအတွက် နေ့စဉ်သာမက နှင်းခူကြောင့် ယားယံခြင်းကို ကုသရာတွင် နူးညံ့သက်သာသော အသားအရေရရှိအောင် သန့်စင်ခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက် ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ ရေချိုးပြီးတာနဲ့ တင်းကြပ်ခြင်း၊ ယားယံခြင်းတွေ ပျောက်ကွယ်သွားပါသည်။